Jean-Louis Robinson: Voatendry ho Masoivohon’i Madagasikara miasa sy monina any Chine
mercredi, 30 octobre 2019 22:59
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra androany alarobia 30 oktobra ny didim-panjakana fanendrene an’i Jean-Louis Robinson ho Masoivohon’i Madagasikara miasa sy monina any amin’ny « République Populaire de Chine».
Jean-Louis Robinson no ambasadaoro fahadimy notendren’izao fitondrana Rajoelina izao, taorian’ny 18 septambra 2019, nanendrena an’i Camille Vital atsy Maorisy, Beriziky Jean Omer any Bruxelles (Belzika), Rajohnson Olivier Hugues Rija any Frantsa ary Yvette Sylla eo anivon’ny Unesco Parisy.
Dokotera i Jean-Louis Robinson ; efa filohan’ny Holafitry ny dokotera izy. Filohan’ny antoko AVANA (Vahoaka Aloha No Andrianina) i Jean Louis Robinson, mpikambana eo anivon’ny ARMADA, nanohana an’i Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2018. Ben’ny tanànan’Ampasikely, Kaominina ambanivohitra ao amin’ny Distrika Amparafaravola izy.
Kandida tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2013, nitarika tamin’ny isam-bato 21,2 % tamin’ny fihodinana voalohany narahin’i Hery Rajaonarimampianina izay nahazo 15,8 %.
Ny 17 janoary 2014, nambara ofisialy ny voka-pifidianana fihodinana faharoa, ary resy i Jean-Louis Robinson tamin’ny salanisam-bato 46,51 %. Voafidy filoham-pirenena tamin’ny 53,49 % ny vato manan-kery i Hery Rajaonarimampianina nifaninana taminy.
Nanatevin-daharana ny mpanohitra tao amin’ny « Alliance pour la Restauration de la Démocratie (ARD) » nahitana antoko politika niisa 31 sy fikambanana roapolo mahery, ny antoko AVANA tarihin’i Jean-Louis Robinson tamin’ny febroary 2014.
Efa in-droa voatendry ho minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ny fiahiana ara-tsosialy tamin’ny fitondrana Marc Ravalomanana ny teo anelanelan’ny 2004 sy 2006 tao amin’ny governemana Jacques Sylla, ary 2007 – 2008 tao amin’ny governemana Charles Rabemananjara.
Nafindra hitantana ny ministeran’ny tanora sy ny kolontsaina ary ny fanatanjahantena indray i Jean-Louis Robinson tao amin’ny governemana Charles Rabemananjara ny 2008 – 2009, ary isan’ireo andiana minisitra nisintaka tamin-dRavalomanana noho ny raharaha 2009.
Banga efa volana maromaro ny toeran’ny masovohon’i Madagasikara any Chine, taorian’ny nanesorana tamin’ny toerany an’i Eric Razafimandimby, dia izao nanendrena an’i Jean-Louis Robinson izao.
70 taona tamin’ity 2019 ity no naha Repoblika an’i Chine ; tamin’ny 1972 kosa i Madagasikara sy Chine no nanomboka nifandray ara-diplaomatika. Nananika ny iray miliara dolara ny fampiasam-bola sinoa teto Madagasikara ny taona 2018. Ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany, ny fanamboarana fotodrafitr’asa, fitsaboana ary ny varotra no isany ahitana ny Sinoa.
Araka ny nambaran’ny mpitondratenin’ny ministeran’ny raharaham-bahiny sinoa, Geng Shuang, ary taterin’ny Xinhua dia ho avy eto Madagasikara ny praiminisitra lefitra Sinoa, Sun Chunlan amin’io volana novambra 2019 io.